Jacaylka Eebbe waa mid la yaab leh, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Sidee yaab u yahay jacaylka Ilaah
In kasta oo aan waqtigaasi ahaa 12 sano, haddana wali waan xasuusan karaa si cad aabahay iyo awoowe, kuwaas oo aad iigu faraxsanaa maxaa yeelay dhamaantood waxaan ahaa kuwa (buundooyinka dugsiga ugu fiican) ee ku qoran kaarkayga warbixinta. Abaal marin ahaan, ayeeyaday waxay i siisay shandad qaali ah oo muuqaal qaali ah, aabahayna wuxuu i siiyay $ 10 ogeysiis ahaan. Waxaan xasuustaa sida ay labadooduba u yiraahdaan inay aniga i jecel yihiin oo ay nasiib u leeyihiin in reerkooda la iiga helo. Waxaan sidoo kale xasuustaa inaan qadaadiicda ka soo qaatay bangi doofaarka oo aan ku beddelato hal doollar. Isagoo ay weheliso $ 1 biil, boorsadayda ayaa u muuqday mid buuxsan. Taasi waa markii aan ogaadey inaan dareemayo inaan ahay sidii milyaneer miiska nacnaca nacnaca ah.
Markasta oo ay June soo dhowaato Maalinta Aabbaha, waxaan ka fikiraa hadiyadoyinkaas (Maalinta aabaha waxaa looga dabbaaldegaa maalinta Axadda saddexaad ee bisha Juun waddamo badan). Xusuustaydii way soo noqotay waxaanan ka fikiray aabbahay, awoowe iyo awoowaha Aabaheenna jannada ku jira. Laakiin sheekadu way socotaa.
Mudo usbuuc ah ma helin markii aan helay boorsadayda iyo lacagtaydii markii aan waayey labadaba. Aad baan u naxay! Waxay ahayd inay ka soo dhacaan jeebadayda dambe markii aan shineemada la joogay asxaabta. Wax kasta waan baadhay, Weligay jidkayga waan ku socday; laakiin inkasta oo la raadinaayay maalmo badan, boorsada iyo lacagtu meelna lagama helin. Xitaa hadda, qiyaastii 52 sano kadib, wali waxaan dareemayaa xanuunka lumitaanka - Kama dan leeyahay qiimaha maaddada, laakiin hadiyado ahaan awoowe iyo aabbahay waxay iila jeedeen wax badan waxayna ahaayeen kuwo qiimo weyn shaqsiyan ii leh. Waa wax xiiso leh in xanuunku dhakhso u baaba'o, laakiin xusuustii quruxda badneyd ee mahadnaqa jacaylka ee uu awoowe iyo aabbahay i siiyay ay igu sii nagaadeen.
In alla intii aan ku faraxsanahay hadiyadooda deeqsinimada leh, waxay ahayd jacaylka aabbahay iyo awoowayaashay ay ii muujiyeen inaan si farxad leh u xasuusto. Miyuusan Eebbe rabin inuu innaguna sidaas yeelo - oo ah inaynu farxad ku wada buuxsano jacaylka iyo hodantinimada jacaylka shuruud la’aanta ah? Ciise wuxuu inaga caawiyaa fahamka qoto dheer iyo baaxadda jacaylkan asaga oo noogu soo dhawaaday masaallooyinkii lumay, qalinkii lumay iyo wiilka canaanta. Tusaalayaashaas waxaa lagu diiwaangeliyay Luukos 15 waxayna muujinayaan jacaylka jacaylka Eebbe u qabo carruurtiisa. Maahmaahyadii waxay tixraacaan wiilka Ilaah ee jidhka ku jira (Ciise) oo u yimid inuu na arko oo guriga noo keeno Aabbihiis. Ciise keliya muu muujinaynin Aabihiis, wuxuu sidoo kale muujiyey aabaha Aabbaha inuu u soo galo lumitaankeenna oo uu na geeyo imaatinkiisa joogitaankiisa. Maxaa yeelay Ilaah waa jacayl saafi ah, weligiis ma joogsan doono inuu magacyadeenna ugu yeedho jacaylkiisa.
Gabayaaga masiixiga ah iyo muusigistaha Ricardo Sanchez ayaa sidan u dhigay: Ibliisku wuu yaqaan magacaaga, laakiin wuxuu kaaala hadlayaa dembiyadaada. Ilaah waa ogyahay dembiyadaada, laakiin magacaaga ayuu kula hadlayaa. Codkeenna Samada jannada ku jira ayaa eraygiisa noo keena (Ciise) iyada oo loo marayo Ruuxa Quduuska ah. Ereygu wuu cambaareeyaa, guuleystaa, oo dembiga na dhex geliyaa (sida barigu uga fog yahay galbeedka). Halkii ay na xukumi lahayd, Ereyga Ilaah wuxuu ku dhawaaqayaa cafis, aqbalid, iyo isdaahirin.
Marka dhegaheenu (iyo qalbiyadoodu) waxay udub dhexaad u yihiin erayga nool ee Eebbe, waan fahmi karnaa eraygiisa qoran, waa Kitaabka Quduuska ah, siduu Ilaahay ugu talo galay. - Ujeeddadiisiina waxay ahayd inuu na gaadhsiiyo farriinta jacaylka ee uu innaga qabo.
Tani waxay ku caddahay Roomaanka cutubka 8, mid ka mid ah buugaagta aan jeclahay. Waxay ku bilaabmaysaa bayaankan: "Markaa hadda xukun ma leh kuwa ku jira Ciise Masiix" (Rooma 8,1). Waxay ku xirmaysaa xusuusintii xoogga lahayd ee weligeed ah ee Eebbe, jacayl shuruud la’aan ah inoo qabo: «Waxaan hubaa in dhimasha ama nolol, midna malaa'ig ama awood ama awood toona, mustaqbal ama mustaqbal toona, midna sarreyn ama hoose ama xayawaan kale oo na kalama qaadi karo jacaylka Ilaah ee ku jira Rabbigeenna Ciise Masiix " (Rooma 8,38-39). Waxaan leennahay ballanqaad ah inaan ku jirno "Masiixa" (oo isagaa iska leh!) Markaan maqalno codkii Ilaah ee Ciise oo leh: "Markuu wada sii daayo idohiisa oo dhan, wuu hor kacaa iyaga, iduhuna way raacaan; maxaa yeelay, codkiisay garanayaan. Laakiin iyagu ma raacayaan shisheeye, laakiin way ka cararayaan; maxaa yeelay, iyagu ma ay yaqaaniin codka shisheeyayaal (Yooxanaa 10,4-5). Waxaan maqalnaa codka Rabbigeenna oo aan raacnaa isaga oo aqrinaya eraygiisa oo aan ogaanno inuu nala hadlayo. Akhrinta Qorniinka waxay naga caawineysaa inaan aragno inaan xiriir la leenahay Ilaah maxaa yeelay taasi waa rabitaankiisa iyo kalsoonidaas ayaa innaga keeneysa isaga. Ilaah wuxuu inagula hadlayaa Kitaabka Quduuska ah si uu noogu xaqiijiyo jacaylkiisa isagoo noo xaqiijinaya inaan nahay carruurtiisa uu jecel yahay. Waxaan ognahay in codkaan maqleyno uu yahay codkii ilaahay. Markii aan u oggolaanno inay nagu hagto inaan ku dhaqano sadaqad iyo markaan si sii kordheysa u aragno is-hoosaysiinta, farxadda iyo nabadda nolosheena - waxaas oo dhan, waan ognahay, inuu ka yimid Ilaaha Aabbeheen.
Sababtoo ah waxaan ognahay in Aabaheena jannada ku jiraa uu noogu yeedho magiciisa sida carruurta uu jecel yahay, waxaan ku dhiirigelineynaa inaan ku noolaano nolol sida Bawlos uu ku sharaxay warqaddiisa kaniisadda Kolossä:
Haddaba sidaas oo kale haatan u eg kuwa Ilaah doortay, sida quduusiin iyo kuwa la jecel yahay, naxariis daran, roonaan, is-hoosaysiin, qaboobaan, dulqaad, Midkiinba midka kale ha u dulqaato oo ha cafiyo haddii mid ka cabanayo mid kale; Sidii Rabbigu idiin cafiyey, idinkuna waad cafiyaysaa! Laakiin wax walba oo ka sarreeya ayaa soo jiidanaya jacaylka, kaas oo ah xidhiidhka kaamilnimada. Oo nabadda Masiix oo laydiinku yeedhay jidh qudha, ayaa qalbiyadiinna ku xukunta, oo mahadnaq.
Erayga Masiixu aad ha u dhex deggan yahay. sabuurro, heeso ammaan ah iyo gabayo xagga ruuxa ah, ayaa Ilaah qalbiyadiinna ugu mahad naqayaa. Oo wax alla wixii aad ku samaysaan hadal ama shuqulba, magaca Rabbi Ciise ku wada samee oo Ilaaha Aabbaha ah ugu mahad naqa isaga xaggiisa (Kolosay 3,12: 17).
Aynu ku qabanno Maalinta Aabbaha Muuji (iyo maalmaha kale oo dhan) in Aabbahayaga Jannada ku jiraa inagu abuuray inuu na jeclaado. Isaga oo ah Aabbahayaga jecel inuu isagu yahay, wuxuu inaga doonayaa inaan maqalno codkiisa si aan ugu noolaano nolol buuxda oo xiriir dhow la leh isaga - annagoo og inuu markasta noo istaagi doono, had iyo goorna nala joogi doono, oo mar walba na jeclaan doono. Aynu marwalba xusuusnaano in Aabbahayaga Jannada ah uu ina siiyay wax kasta oo ku jira iyo xagga Masiixa Wiilkiisa dhalashada leh. Si ka duwan jeebka iyo lacagta aan lumiyay sanado badan ka hor (ma aysan raagin) waa hadiyadda Eebbe kugu siiyay (iyo aniga) had iyo jeer xaadir. Xitaa haddii aad hilmaamto hadiyaddiisa in muddo ah, Aabbahayaga Jannada ku jiraa had iyo jeer waa la joogaa - wuu garaacayaa, wuuna ku doonayaa oo ku helayaa (xitaa haddii aad si muuqata u luntay) si aad si buuxda ugu aqbali karto una dareemi karto hadiyadiisa ah jacaylka aan shuruud lahayn, ee aan dhammaanayn.